PS Plus အားတရား ၀ င်အခမဲ့မည်သို့ရယူနည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
တရားဝင် PS Plus ကိုမည်သို့အခမဲ့ရနိုင်သနည်း
Cristian Garcia | 28/09/2021 09:22 | အားကစားပြိုင်ပွဲ
သင့်မှာ Playstation ရှိသလား၊ ရယူလိုပါသလား PS Plus အခမဲ့ဖြစ်သည်? ဘယ်သူလဲ၊ မဟုတ်ဘူးလား။ ကောင်းပြီ၊ ဒီဆောင်းပါးကအဲဒါကိုလုံးလုံးလျားလျားရည်စူးပါတယ်။ သင် PS Plus ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအခမဲ့ရနိုင်သည်ဟုသေချာစေရန်သင်ကြိုးစားရမည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလူနည်းစုမဟုတ်ဘူး၊ လပေါင်းများစွာရောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကအရည်အသွေးကောင်းတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းဒီကြေးပေးသွင်း ၀ န်ဆောင်မှုနဲ့အကွက်ကိုဖြတ်သွားရသလိုမင်းသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေအားလုံးကိုအခမဲ့ရချင်ရင်မင်းကိုအဆုံးထိဖတ်ဖို့ကလွဲပြီးမင်းမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။
သင်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်လျှင် PS PS အခမဲ့ရယူရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်၊ PS Plus မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်မည်သည့် Playstation အသုံးပြုသူအတွက်မဆိုသက်ဆိုင်နိုင်သောအခြားအချက်အလက်များကိုသိနိုင်လိမ့်မည်။ မင်းဒီ ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းဘာကိုသိတာလဲဆိုတော့မင်းဒီကိုရောက်လာတာဆိုရင်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကဘယ်လိုလဲ၊ မင်းကဘာလဲဆိုတာမသိဘူး၊ မင်းကမင်းလိုအပ်သမျှကိုကူညီမယ့်နိဒါန်းတစ်ခုအမြဲရှိလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုကဒီနေ့ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုကဘာလဲဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ် သင်၏သူငယ်ချင်းများ (သို့) သူစိမ်းများနှင့်အွန်လိုင်းကစားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
1 Playstation Plus ဆိုတာဘာလဲ။
2 အခမဲ့ PS Plus ကိုမည်သို့ရယူနိုင်သနည်း။
2.1 PS Plus ကို ၁၄ ရက်အခမဲ့ပေးသည်
2.2 အကြွေးဝယ်ကတ်များမသုံးဘဲအခမဲ့ Ps Plus
Playstation Plus ဆိုတာဘာလဲ။
Playstation Plus သည်အခြေခံအားဖြင့် Sony သည်၎င်း၏ Playstation4နှင့် Playstation5console များအတွက်လစဉ်ကြေးပေးသွင်း ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သင်မသိသေးပါက PS Plus သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အွန်လိုင်းပုံစံများဖြင့်ကစားလျှင်မဖြစ်မနေ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်နှစ်သက်သောဗီဒီယိုဂိမ်းများကို ၀ ယ်ပါ။ အခြားခြွင်းချက်အချို့ရှိသော်လည်း သူတို့အွန်လိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်း ၉၉.၉% ဟာငွေပေးချေမှုလိုလိမ့်မယ် ဤစာရင်းပေးသွင်းမှု၏ သင်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်။ ၎င်းကိုမည်သို့အခမဲ့ရနိုင်သည်ကိုမသိလျှင်၊ ဟုတ်ပါတယ်။
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဤကဲ့သို့သောတစ်ခုတည်းသော ၀ န်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါ။ XBOX တွင် Microsoft သည်သင့်အားအွန်လိုင်းမှငွေတောင်းခံလိမ့်မည်။ ထို့အတူ Nintendo Switch တွင်လည်းထို့အတူပင် ၎င်းသည် Sony နှင့် Playstation အတွက်သီးသန့်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်ပျင်းရိခြင်းကြောင့်၎င်းတို့အားအခမဲ့ရယူရန်စိတ်မ ၀ င်စားပါက၎င်းတို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးချေနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုသုံးလပတ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ် ၀ ယ်နိုင်သည်။ မင်းလစဉ်လတိုင်းပေးပြီးတစ်နှစ်ပြည့်အောင်ကစားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့မင်းပိုက်ဆံနည်းနည်းချွေတာနိုင်တယ်၊ မင်းသင်္ချာကိုလုပ်ရင်ပိုစျေးကြီးလိမ့်မယ်။
အမှန်မှာ၊ သင်၏စျေးနှုန်းအစီအစဉ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ရန်၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ Ps Plus ကိုတစ်လလျှင်ယူရို ၈.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။ သင်သုံးလတစ်ကြိမ် ၀ ယ်လျှင်ယူရို ၂၄.၉၉ ဖြစ်လိမ့်မည်၊ သင်နှစ်စဉ်ကြေးပေးလျှင်ယူရို ၅၉.၉၉ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤဆောင်းပါးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းဖြင့်မင်းကိုအခမဲ့ Ps Plus ရဖို့မင်းကြိုးစားမယ်.
အခမဲ့ PS Plus ကိုမည်သို့ရယူနိုင်သနည်း။
ငါတို့ကမင်းအရမ်းသိချင်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအပိုင်းကိုရောက်နေပြီ။ ဤလှည့်ကွက်လေးများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Ps Plus ကိုသုံးရန် Playstation4(သို့) Playstation5(၅) ကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အဲဒါရှင်းပါတယ်။ အခြားနည်းလမ်းအချို့ကမင်းကိုတစ်ဖက်ကမ်းခတ်ဖမ်းနိုင်တယ်၊ ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့ပထဝီဒေသမှာကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုအပ်သော (အခြေခံ) နှင့်အနည်းငယ်သတိပေးချက်ကိုသတိပေးပြီးသည်နှင့်သင်လိုအပ်မည့်အဆင့်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့သွားပါ။
PS Plus ကို ၁၄ ရက်အခမဲ့ပေးသည်
ဤသင်ခန်းစာသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်ရမည့်အရာသည်အခြေခံအားဖြင့် Playstation Plus အခမဲ့ ၁၄ ရက်ဖြစ်သည်။ မင်းမှာဘာဆုံးရှုံးမှုမှမရှိဘူး။ ထောင်ချောက် (သို့) ကတ်ထူပြားမရှိ၊ သင်လက်ထဲရှိရန်သာလိုသည် သင်၏ console နှင့် credit သို့မဟုတ် debit card အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်။ ဤအခမဲ့ရက်များကိုလည်ပတ်ရန်ကတ်များမရှိလျှင်သင်တန်း၏နောက်အပိုင်းသို့သင်သွားရပါလိမ့်မည်။ သင်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
စတင်ရန်သင်၏ console သို့ သွား၍ setting menu ထဲသို့ ၀ င်ပါ။ သင် menu ထဲရောက်သည်နှင့် Playstation Network သို့ သွား၍ ထို option ကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်နိုင်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အဓိက PS4 အဖြစ်အသက်သွင်းပါ သို့မဟုတ်သင် Playstation5ကိုသုံးလျှင်၎င်းကိုအဓိက PS5 အဖြစ်အသက်သွင်းလိမ့်မည်။ ဤနောက်တွင်သင်လုပ်ရမည့်အရာသည်အခြေခံအားဖြင့်သင်၏ console တွင် PSN အသုံးပြုသူအသစ်ကိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဖန်တီးထားသောအခြားအီးမေးလ်ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။
PC အတွက်အကောင်းဆုံး console emulators ၇ ခု
ယခု PSN အကောင့်ပြုလုပ်ရန်သင်လိုက်နာရမည့်ပုံမှန်အဆင့်များတစ်ခုစီတိုင်းကိုလိုက်နာပါ။ အကောင့်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ console မှာ data တွေရိုက်ထည့်ပြီးရင် Playstation Store ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ဤအသစ်နှင့်သင် PS Plus နှင့်အပိုင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည် ၁၄ ရက်အခမဲ့ရွေးချယ်မှုကိုရွေးပါ။ ယခုသင်၏အကြွေး (သို့) ဒက်ဘစ်ကတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမည်သည့်စိုးရိမ်မှုမှမရှိဘဲငွေပေးချေမှုကိုအပြီးသတ်ပါ။ ဆက်လုပ်ပါ။ သင်အဆင့်အားလုံးပြီးသည်နှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအပိုင်းသို့ သွား၍ လာမည့်ရက်အနည်းငယ်တွင်သင့်အားငွေကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
ယခုသင်သည် Playstation Network ဆက်တင်များသို့သွားပြီး PS4 ကိုသက်ဝင်စေရန်ယခင်ကသင်ပိတ်ထားခဲ့သောရွေးချယ်မှုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ PS Plus အားပြဿနာမရှိဘဲ ၁၄ ရက်အခမဲ့သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းအားသင်ပေးဆပ်ခဲ့သကဲ့သို့ခံစားခွင့်အားလုံးကိုသင်ရနိုင်သည်။ ၁၄ ရက်အကြာတွင်စာရင်းပေးသွင်းမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်၎င်းကိုသတိပြုပါ သင်ကုန်သွားသောအခါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်လုပ်ရပါမည်။
အကြွေးဝယ်ကတ်များမသုံးဘဲအခမဲ့ Ps Plus
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ မင်းမှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်မင်းမှာအကြွေးဝယ်ကဒ်မရှိဘူးဆိုရင်၊ ငါတို့ကမင်းကိုပေးမယ့်ဒီအခြားနည်းလမ်းကိုလိုက်နာနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ပိုလေးပြီးပိုနှေးသည်၊ ၎င်းသည်၎င်းကိုမကြိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြေလှမ်းများကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ ယခင်နည်းလမ်းသို့ပြန်သွားရန်ဤ credit သို့မဟုတ် debit card ကိုရယူရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သွားရန်အဆင့်များဖြင့်သွားကြသည် credit card မပါဘဲအခမဲ့ ps plus
စတင်ရန်သင်၏ Playstation console ၏ setting များကိုထပ်မံရိုက်ထည့်ပြီး PS Network အပိုင်းသို့သွားပါ။ ယခုရွေးချယ်မှုများအတွင်း ထို PSN အကောင့်ကိုမူလအနေနှင့်ပိတ်ထားပါ။ PS Network တွင်အသုံးပြုသူအသစ်တစ်ခုကိုထပ်မံဖန်တီးပါ။ မည်သည့်အမြန်မေးလ်ကိုမဆိုသင်သုံးနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ အခုအီးမေးလ်ကိုသွားပြီးမင်းရဲ့ Playstation4(သို့)5မှာ user profile တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးအဲဒီအကောင့်နဲ့ဝင်လိုက်ပါ။ PS Network options သို့ပြန်သွားပြီးထိုအကောင့်သစ်ကိုအဓိကအကောင့်အဖြစ်ဖွင့်ပါ။
အမြင်များ eneba: ဗီဒီယိုဂိမ်းများ ၀ ယ်ရောင်းရောင်းသည်စိတ်ချရသနည်း။
ယခုသင်သိပြီးပြီဖြစ်သောဤအဆင့်များအားလုံးအပြီးတွင်အပိုင်းသစ်ရောက်လာသည်။ PS Plus လိုအပ်သောအွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုကိုသင်ရိုက်ထည့်ရမည်၊ အွန်လိုင်းတွင်ကစားရန်ကြိုးစားသောအခါသင်လိုချင်လျှင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ Ps plus ကိုနှစ်ရက်စမ်းပါမရ။ ထိုရွေးချယ်မှုကိုရွေးပြီးနောက်ပိုင်းအသုံးပြုသူအား ဖျက်၍ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။ မင်းမှာ Ps Plus ကို ၄၈ နာရီရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေပြီးသွားရင်မင်းသက်တမ်းတိုးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ အကောင့်သစ်နဲ့အမြဲရတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အားကစားပြိုင်ပွဲ » တရားဝင် PS Plus ကိုမည်သို့အခမဲ့ရနိုင်သနည်း
ကျွန်ုပ်၏ PC သည် Kindle ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ၊ အဖြေရှာပါ